Ny 4 amin'ny toerana tora-pasika 5 tsara indrindra eran-tany dia any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny 4 amin'ny toerana tora-pasika 5 tsara indrindra eran-tany dia any Etazonia
Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny 4 amin'ny toerana tora-pasika 5 tsara indrindra eran-tany dia any Etazonia.
Nijery tora-pasika 100 manerana izao tontolo izao ny fanadihadiana ary nametraka azy ireo tamin'ny lafin-javatra toy ny toetr'andro, ny maripanan'ny ranomasina, ny vidin'ny hotely, ny isan'ny trano fisakafoanana, ary ny sandan'ny media sosialy amin'ny tora-pasika mba hahitana izay tora-pasika no toerana fialan-tsasatra tsara indrindra.
Ary koa ny tora-pasika tsara tarehy, ny mijery ny miverina avy any Copacabana dia manome anao ny fomba fijery ny iray amin'ireo tanàna malaza indrindra eto an-tany eo ambany fanaraha-mason'ny sarivongan'i Kristy Mpanavotra.
Ny isan'ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana akaikin'ny tora-pasika dia 11,153, ny ankamaroan'ny tora-pasika rehetra ao amin'ny lisitra.
Tora-pasika amerikana efatra no mandrafitra ny sisa amin'ireo tora-pasika 5 ambony indrindra, miaraka amin'ny tora-pasika tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatra any Etazonia i Miami Beach ary toerana faharoa amin'ny ankapobeny.
Miaraka amin'ireo tora-pasika manao ny sasany amin'ireo toerana fialan-tsasatra malaza indrindra eo amin'ireo mpizahatany amerikana, ireo manam-pahaizana momba ny dia dia nanambara ny toerana fialan-tsasatra tsara indrindra eran-tany.
Ary hita fa tsy mila mandeha lavitra ny Amerikana mba hanao fitsangantsanganana tora-pasika lehibe, satria ny tora-pasika amerikana efatra no laharana dimy voalohany.
Top 10 tora-pasika ho an'ny fialan-tsasatra manerana izao tontolo izao
laharana Anarana tora-pasika tenifototra instagram Isan'ny toeram-pisakafoanana/Bar Vidin'ny hotely antonony ($) Temperature antonony (haavony) Salan'ny orana isan-taona (mm) Salanisan'ny mari-pana amin'ny ranomasina (haavony) Total Score
7 Pink Sand Beach, Antigua 40,300 3 $221.94 97.2 899 81.7 5.93
10 Cayo Coco, Kiobà 145,000
Copacabana Beach any Brezila dia nomena ny tora-pasika tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatra amin'ny fikarohana. Ary koa ny tora-pasika tsara tarehy, mijery ny miverina avy any Copacabana dia manome anao ny fomba fijerin'ny iray amin'ireo tanàna malaza indrindra eto an-tany eo ambany fanaraha-mason'ny sarivongan'i Kristy Mpanavotra. Ny isan'ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana akaikin'ny tora-pasika dia 11,153, ny ankamaroan'ny tora-pasika rehetra ao amin'ny lisitra. Ambonin'izany, Copacabana isa tsara amin'ireo lafin-javatra hafa ao anatin'izany ny trano fandraisam-bahiny, ny hafanan'ny rivotra ary ny hafanan'ny rano.
Tora-pasika amerikana efatra no mandrafitra ny sisa amin'ireo tora-pasika 5 ambony, miaraka amin'ny Miami Beach mametraka ny tora-pasika tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatra any Etazonia ary toerana faharoa amin'ny ankapobeny. Ity tora-pasika ity dia iray ho an'ny mpikatroka sy mpampiasa media sosialy, satria nahazo tenifototra 14.4 tapitrisa tao amin'ny Instagram. Midika izany fa io no betsaka indrindra Instagrammed tora-pasika, manana tenifototra mihoatra ny 13.7 tapitrisa noho ny tora-pasika antonony. Ny tora-pasika Miami iray hafa dia eo amin'ny laharana fahefatra, South Beach, izay nahazo isa ambony noho ny salan'isan'ny hafanan'ny rivotra 75.9℉, ary mbola mafana kokoa any an-dranomasina miaraka amin'ny salan'isa rano 80.6℉.
Ny Venice Beach dia nitana ny laharana fahatelo amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny trano fisakafoanana faharoa ambony indrindra (10,578), ary koa ny tenifototra Instagram fahefatra indrindra (4.2 tapitrisa). Satria any amin'ny faritr'i Los Angeles ihany koa no misy azy, dia manana isa mitovy amin'ny Venice Beach ny tora-pasika Santa Monica, ny hany antony mahatonga azy ho ambany kokoa (eo amin'ny toerana faha-5) dia noho ny tenifototra Instagram latsaka 3.76 tapitrisa.